घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू देजन कुलसेभस्की बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो देजन कुलसेभस्कीको जीवनीले तपाईंलाई उसको बाल्यकाल कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी, जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू बताउँदछ।
संक्षेपमा, हामी तपाईंलाई स्विडेनी फुटबलरको एक पूर्ण जीवन कहानी प्रस्तुत गर्दछौं - शुरुआती दिनदेखि जबसम्म उहाँ प्रख्यात भए। तपाईंको भोक जगाउनको लागि, प्रसिद्धिको लागि उहाँको सुरुआतमा एक नजर हेर्नुहोस् - देजन कुलुसेभस्कीको बायोको स्पष्ट सार।
उसको बहु-पक्षीय क्षमताका लागि धेरै प्रशंसकहरूले उहाँलाई स्वीडेनको सबैभन्दा सम्मानित प्रतिमासँग तुलना गरेका छन्, Zlatan Ibrahimovic। मिडिया लेबल पनि गर्दछ देजन कुलुसेभस्की ब्लुग्लटको नयाँ मालिकको रूपमा.
जसको उसको उल्का वृद्धि फुटबलको संसारमा बाढी आउँदैछ, हामी महसुस गर्छौं कि केवल केही फ्यानहरू मात्र उनको नाम पछाडि कथा थाहा छ। थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
देजन कुलुसेभस्की बाल्यकाल कहानी:
जीवनी सुरु गर्नेहरूको लागि, उहाँ उपन्यास "छाया" लिनुहुन्छ। देजन कुलुसेभस्की जन्म अप्रिल २००० को दिन वाल्डिby्बी, स्विडेनमा मासेडोनियाका अभिभावकहरूमा भएको थियो। बहुमुखी फुटबलर आफ्नो परिवारका दुई बच्चा मध्ये कान्छी हुन्। उसको सुन्दर आमा (उनको s० को दशकमा) र शान्त देखिदै बुबा (आफ्नो s०s मा) हेर्नुहोस्।
स्वीडेनमा जन्म पाए पनि, उहाँ आफ्नो मातृभूमि सहित विभिन्न भाषाहरू सिक्न मा हुर्कनुभयो। पछिल्लो बच्चा (घरको बच्चा) को रूपमा, देजन कुलुसेभस्कीका आमा बुबा र ठूलो बहिनी (सान्द्रा) ले सँधै व्यक्तिगत आवश्यकताहरू आइपुगे पछि उसलाई आफ्नो बाटोमा ल्याउँथे।
देजन कुलुसेभस्की परिवार पृष्ठभूमि:
स्पीड ड्रिबलर एक धनी स्टकहोल्मबाट छ - स्विडेनको राजधानी १ 14 टापुहरूमा अवस्थित छ र br 57 वटा पुलहरू द्वारा जोडिएको छ। देजन कुलुसेभस्कीका आमाबुबा धनी प्रकारका थिए जसले उसलाई फुटबललगायत नयाँ खेलौनाहरू स afford्कलन गर्न सक्षम बनाए। खुसी बच्चा केटा एक धनी कथा संग धनी संग ती मध्ये छैन।
देजन कुलुसेभस्की परिवार उत्पत्ति:
चीजहरू ठीक गरौं; स्वीडेनको जन्मभूमि भए पनि ऊसँग म्यासिडोनियाको जरा छ। देजन कुलुसेभस्कीका आमा बुबा दुबै म्यासेडोनियावासीहरू हुन् जसले आफ्ना छोरालाई स्वीडेनमा राख्ने निर्णय गरे। फुटबलर एक बहुभुज हुन को लागी विविध वंश को लागी हुर्कियो।
अनुसन्धानले देखाउँदछ कि ऊ पाँच भाषाहरुमा अस्वाभाविक छ - त्यो उनको जन्म देश स्लाविक, इटालियन, अंग्रेजी र जर्मनका लागि। तपाईले कालो र पहेलो राष्ट्रिय रंग लगाउनु भएको छ, उसले बाल्कन देशलाई (म्यासेडोनिया) धेरै गहिरो मनमा राख्छ।
देजन कुलुसेभस्की अनटल्ड क्यारियर कहानी:
युवाले सर्वप्रथम आफ्नी बहिनी सान्ड्राको माध्यमबाट फुटबलको माया जगाउने प्रेरणा प्राप्त गरे। चाखलाग्दो कुरा, उनी एक प्रशंसक थिए रोनाल्डिन्हो र उनको कोठाको भित्तामा ब्राजिलियन वालपेपर पनि थियो। त्यतिखेर, सान्द्रा आफ्ना साना भाईसँग खेतमा ट्याग गर्छिन्, उनी चियर्सको बखत सडक फुटबल अभ्यास गर्दैछन्।
साइड-लाइनबाट Sandra को समर्थनले छ बर्ष उमेरकालाई अन्य बच्चाहरूलाई उछिनेमा ध्यान केन्द्रित गर्ने कारण दियो। काम औपचारिक रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि, देजन कुलुसेभस्कीका अभिभावकले उनका छोरालाई २०० Maced मा म्यासिडोनियाको आईएफ ब्रोम्मापोजकर्ण युवा एकेडेमीमा भर्ना हुने अनुमति दिए।
फुटबलको साथ प्रारम्भिक जीवन:
दुःखको कुरा, एकेडेमीमा उनका शुरुका दिनहरू मौनताले थकित भए। मतलब, कोही साथीहरू र परिवारबाहेक अरू कसैले पनि आफ्नो प्राकृतिक क्षमताको कदर गरेन। जे होस्, उसले आफ्नो कौशलले कुरा गर्ने तहसम्म पुग्ने लक्ष्यसहित स्पष्ट र सकारात्मक दिमाग राख्यो। उनले एक पटक ठूलो हुँदै जाँदा भने;
“कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। असम्भवले केवल लामो समय लिन्छ। तपाईले जहिले पनि चाहानु भएको तपाईले पाउनुहुन्छ। तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको आफैमा विश्वास गर्नु हो। ”
आफ्ना आमाबुबा र बहिनीको सहयोगमा, उनले म्यासिडोनियामा १० वर्षको युवा प्रशिक्षण लिए। धन्यबाद, २०१ 15 मा १ 2015 बर्षे कुलुसेभस्कीले मेसेडोनियाको अण्डर १ national राष्ट्रिय टीममा सम्मिलित हुन कल प्राप्त गरेपछि सफलताका ढोका खुले।
म्यासिडोनियासँग पाँच खेलहरू स्विडेनलाई उनीहरूले खोजिरहेका थिए भनेर विश्वस्त पार्न पर्याप्त थिए। तसर्थ, तिनीहरूले देजनलाई अधिक अनुकूल प्रस्ताव दिए जसले उनलाई स्वीडेनको लागि उसको बुबाआमाको जन्म देश छोडे।
देजन कुलुसेभस्की जीवनी - फेम टु फेम स्टोरी:
उनको अन्तर्राष्ट्रिय कलको खबरले उनका बुबा गर्व र उसकी आमा निस्सन्देह खुशी थिए। क्लब पक्षबाट, उनको परिवारको खुशी कुनै सीमा थाहा थिएन किनकि ती युवाले अटलान्टाबाट ट्रायलहरू पार गरे।
कुनै टाढा कुनै समय मा, उनले उसको बिरूद्ध उभिएका ठूला अनौठो कुराको सामना गर्न थाले। भाग्यको रूपमा यो हुनेछ, अर्को ठूलो-स्टारले एक्सेलेरेसन, गति, स्टिमिनाको साथ आशीर्वाद पायो। यो उपलब्धि उनको लेबल गर्न मिडिया बनायो नयाँ Zlatan.
देजन कुलुसेभस्की सफलता कहानी:
जसै उनले आफ्ना प्रयासहरूलाई अगाडि बढाए, उनले पनि आफ्नो जन्म राष्ट्रको लागि ठूलो सफलता रेकर्ड गरे। २०१ 2019 मा, कुलुसेभस्की स्विडेनको राष्ट्रिय टोलीमा सामेल भए। केही उपस्थितिमा, उनले आफूलाई उत्कृष्टताको पुरस्कार कमाए।
नोभेम्बर २०२० मा, उनी पनि बीचमा थिए २००० मा दशवटा सबैभन्दा महँगो खेलाडीहरू जन्म वा पहिले बजार मूल्य द्वारा। ऊ विश्वव्यापी घरको नाम बन्नु अघि यो समयको कुरा मात्र हो। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
Dejan कुलुसेभस्की प्रेमिका र पत्नी हुन को हुनुहुन्छ?
तुलनाको रूपमा Speedter आफ्नो सम्बन्ध जीवन मा एक फरक स्वाद मिल्यो फ्रेडी लजj्गबर्ग, जसले आठ बर्षको अन्तरिक्षमा आठ विभिन्न महिलालाई मिति दिए। उसले यहाँ उसको दृश्य र एक मात्र प्रेमिकामा दृढ रहनु उचित ठान्छ।
कुनै श doubts्का छैन, प्रेम-चराहरूले सम्भवतः पति र पत्नी बन्ने को स्तरमा उनीहरूको सम्बन्ध लिन्छन्। हामी आशा गर्दछौं कि उनीहरूको प्रेम कथा कहिल्यै मर्दैनन् र उनीहरूले गाँठो बाँधेर अन्त हुन्छ।
व्यक्तिगत जीवन तथ्यहरु:
कुलुसेभस्कीले एउटा अनुपम गुण पाएको छ जसले उसलाई अरू सबै भन्दा ईमानदारीलाई मूल्यवान तुल्याउँछ। ऊ कडा परिश्रमबाट लजाउँदैन र स्थिर रहँदा सान्त्वना पाउँछ।
जुभेन्टस मिडफिल्डरलाई पोखरीमा आफ्ना साथीहरूसँग केहि समय खर्च गर्न मन पर्छ। उसको अभिभावकको घर देशबाट, त्यहाँ धेरै केटाकेटीहरू छन् जुन उनको उत्सवको शैली मन पराउँछन् र हेर्छन् Dejan एक ठूलो भाइ को रूप मा जसको पाइलाहरु अनुसरण गर्न लायक छ.
देजन कुलुसेभस्की जीवनशैली:
हो, अब यो खबर छैन कि उसले जुभेन्टसमा पर्याप्त पैसा कमायो। हामीले उसको खर्च ढाँचाको विश्लेषण गरेका छौं र पत्ता लगायौं कि ऊ औसत जीवन शैलीमा बाँच्दछ जुन उसको सम्पत्तीसँग मिल्छ।
मिलनयोग्य विger्गरले आफूलाई वहन गर्न सक्ने खुशीलाई अस्वीकार गर्न आवश्यक देखेको छैन। हामीले उनलाई आफ्नो बिदाको दिनहरू समुद्री किनारमा यटमा यात्रा गरिरहेका रहेछौं। सत्य यो हो कि ऊ त्यस्तो जीवन बाँचिरहेको छ जुन उसको सँगी देशवासी भन्दा भिन्नै छ। अलेक्जेंडर इस्क.
जुभेन्टस स्टारले जुभेन्टसमा वार्षिक salary २०००, 2,002,997 को तलब पायो र यसको लगभग € १. approximately मिलियनको वर्थ छ
देजन कुलुसेभस्की पारिवारिक जीवन तथ्यहरू:
केही व्यक्तिहरू केवल उहाँसँगको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दैनन् केवल पिचमा उसले के गर्छ। यी व्यक्तिहरू उनको आमा, बहिनी र बुबा हुन्। यस खण्डमा, हामी तपाईंलाई देजन कुलुसेभस्कीको परिवारको बारेमा तथ्यहरू प्रस्तुत गर्दछौं, जुन उसको घरको टाउकोबाट शुरू हुन्छ।
देजन कुलुसेभस्की फादरको बारेमा:
शब्दले बुबा र छोराबीचको बन्धनको वर्णन गर्न सक्दैन जुन उहाँ र उसको बुबाको बीचमा छ। कुलसभ्स्कीका बुबाले आफ्नो पैतृक जिम्मेवारी पूरा गर्नुको सट्टा जुभेन्टसमा भर्ना भए पछाडि उहाँ उनको प्रशिक्षण शिविरमा अक्सर जाँच गर्नुहुन्छ।
दुर्भाग्यवस, अक्टोबर २०२० मा उनको धेरै भेटहरू मध्ये एउटामा, उनका कुलुसेवस्की बुबा एक दुर्घटनामा फसे। धन्यबाद, उहाँ डरलाग्दो परीक्षाबाट आफ्नो उल्टो जीप बाहिर आए।
देजन कुलुसेभस्की आमाको बारेमा:
यस फुटबलर आफ्नो आमा संग समय बिताउने धेरै मन पराउँछन् कि तपाईं उनलाई आमाको केटाको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। पछिल्लो जन्म को रूप मा, यो जान्न स्वाभाविक छ कि जब उनी आफ्ना चुनौतिहरु ठूला हुन्छन् उनले आफ्नी आमाबाट सान्त्वना पाउँदछन्।
देजन कुलसेभस्की भाई बहिनीहरूको बारेमा:
दायाँ-वि .्गरको कुनै भाई हुँदैन तर एउटी बहिनी जसलाई उसले प्रेम गर्छ। जसरी मुर्गीले आफ्ना बच्चाहरूलाई सुरक्षा दिन्छ, त्यसरी नै उनकी जेठी बहिनीले पनि उसलाई हेरचाह गर्छिन्। सान्ड्रा सुन्दर छिन र एक पटक आफ्नो सानो बाल्यकाल देखि उनको सानो भाई को अधिक प्रभावकारी थियो।
देजन कुलुसेभस्की नातेदारहरूको बारेमा:
उसको हजुरआमा र हजुरबुबाको बारेमा कुनै जानकारी छैन। साथै, यस्तो देखिन्छ कि कुलुसेभस्कीसँग यस जीवन कथा लेख्ने क्रममा कुनै भतिजा वा भतिजा छैन। जे होस्, हामी पक्का छौं कि उसका काका र काकीलाई उनको उपलब्धिहरुमा गर्व छ।
देजन कुलुसेभस्की अनटोल्ड तथ्यहरू:
विger्गरको जीवन कहानी गोल गर्न, यहाँ केहि सत्य छन् जुन तपाईंलाई उसको बायोको पूर्ण ज्ञान लिन मद्दत गर्दछ।
स्विडेनका औसत नागरिक जो कमाउँछन् € 52,919 एक बर्ष को लागी काम गर्नु पर्छ 37.8 वर्ष उसको वार्षिक तलब बनाउन। यहाँ उसको आय को एक ब्रेकडाउन छ।
यूरो मा आय (€)
प्रति वर्ष € 2,002,997
प्रति महिना € 166,916
प्रति हप्ता € 38,460
प्रति दिन € 5,494
प्रति घण्टा € 229
प्रति मिनेट € 3.8
प्रति सेकेन्ड € 0.06
तपाईंले देजन कुलुसेभस्की हेर्न शुरू गर्नुभयोबायो, यो उसले कमाएको हो।
तथ्य # १: घरपालुवा जनावरलाई माया
उसको व्यापारमा धेरै सहकर्मीहरू जस्तै कुलुसेभस्कीले कुकुरहरूमा पनि चासो लिएको छ। त्यसकारण उनलाई नाला भन्ने परिवारको कुकुरले कुटपिट गर्ने पसल छ। प्यारो सानो प्राणी प्राय: कुलुसेभस्की वरपर जब उसले आफ्नो परिवारको घर भ्रमण गर्दछ।
तथ्य # १: देजन कुलुसेभस्की धर्म:
उसले यसलाई नहेर्न सक्छ, तर मिलनसार बल-किकरसँग उसको इसाई विश्वासको लागि गहिरो प्रेम छ। के तपाइँ जान्नुहुन्छ कि एक पटक उसले सान्ता क्लजको पोशाकमा लुगा लगाएको थियो जब केहि बच्चाहरूसँग क्रिसमस मनाउँथ्यो? यसबाट हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं कि देजन कुलुसेभस्कीका आमा-बुबाले उनलाई इसाई विश्वास अनुसार हुर्काए।
तथ्य # १: Amad Diallo संग मित्रता:
प्रशस्त विger्गरले मैत्रीको घनिष्ठ बन्धन साझा गर्दछ Amad Diallo। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, कुल्सेभस्की र डायललो राम्रा पुराना दिनहरूमा साथी भए, जब उनीहरू दुबै एटलान्टासँग सम्झौता गरेका थिए।
कुनै श doubts्का छैन, कडा परिश्रम र स्थिरता संग, प्रशंसनीय dribbler आफ्नो क्षमताहरु को पूरा गर्न को लागी सम्भव छ (rated 88 रेटेड)। जस्तै किंवदन्तीहरूसँग खेल्दै सी रोनाल्डो, मिडफिल्डर / विger्गर उद्योगमा सर्वश्रेष्ठसँग संबद्ध गर्नमा गर्व गर्दछ।
देजन कुलुसेभस्कीको जीवनीले हामीलाई यो कुरा बुझ्नको लागि सहयोग गर्दछ कि सम्भावनाहरूमा पूर्ण विश्वासको कार्य सफलताको कुञ्जी हो। जुभन्टस प्रोडिजी पनि यस धारणामा छ कि असम्भवले आफूलाई मूर्खहरूको शब्दकोशमा समावेश गर्दछ।
सुरुबाट, डेजन कुलुसेभस्कीका अभिभावकहरूले यो सुनिश्चित गर्छन् कि उनले आफ्नो दृश्यहरू बिर्सनेछन्। जबकि उनका बुबाले उनलाई टेक्नेलिटी समर्थन गर्नुभयो, उनकी आमाले सान्त्वनादायी भूमिका गर्नुभयो। उनकी बहिनी सान्ड्राले उनलाई सफलताको बाटोमा उन्काए जसले गर्दा ती दुई बिच एक आजीवन सम्बन्ध बन्न पुग्यो।
हाम्रो टीम सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछ जबकि लेख Dejan कुलुसेभस्कीको बायो प्रदान गर्ने क्रममा। कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाईंले केहि फेला पार्नुभयो जुन हाम्रो सामग्रीमा सही देखिँदैन। अन्यथा, हामीलाई टिप्पणी सेक्सनमा जानकारी दिनुहोस्, तपाई कुलुसेभस्कीको बारेमा के सोच्नुहुन्छ। उसको मेमोइरको झलक पाउन विकी टेबल प्रयोग गर्नुहोस्।
पुरा नाम: देजन कुलुसेभस्की
निक नाम: shady
उमेर: २ years बर्ष र १ महिना पुरानो
जन्मस्थान: भल्लिby्बी, स्विडेन
बहिनी: सान्ड्रा कुलुसेभस्का
वार्षिक वेतन: € 2,002,997
स्थिति: दायाँ वि win्गर र मिडफिल्डर
नेट मूल्य: € १. million मिलियन (लगभग)
उचाइ: 1.86 मीटर (6 फुट 1 मा)
Matthijs de Ligt Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य
परिमार्जित मिति: अक्टोबर,, २०१ 11
परिमार्जित मिति: नोभेम्बर 9, 2020
परिमार्जित मिति: डिसेम्बर २,, २०१ 21